सरकार चलाउन माधव नेपाललाइ दिने देउवा र प्रचण्डको यस्तो तयारी ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ राजनीति/सरकार चलाउन माधव नेपाललाइ दिने देउवा र प्रचण्डको यस्तो तयारी !
काठमाडौं – सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्णायक मानिएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनाएर सरकारको ‘रिमोर्ट’ हातमा दिने तयारी गरिएको छ ।
नेता नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्न प्रयास गरिरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धनले नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्न गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले पनि सरकार सञ्चालनमा सघाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको बेला अध्यक्ष बन्न माधव नेपालको नाम प्रस्ताव भएको छ । यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्ष्ँ बन्न खोजेका थिए । तर अब नेपाललाई ओलीसँग मिल्नबाट रोक्न अध्यक्ष बनाउन खोजिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाललाई आफ्ना सांसद सरकारमा पठाउन र उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेता नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेका बेला आफू निकट नेतालाई उनले यसबारे जानकारी गराएका जनाइएको छ । एमाले पार्टी एकताको प्रयास वारपार नहुञ्जेल सरकारमा सहभागी र संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेबारे निर्णय लिन नसक्ने नेपालले जवाफ फर्काएका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालबीचका पटक–पटकका छलफलमा समेत यिनै विषयमा कुराकानी भएकाले उनलाई पर्खिएका कारण नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन । शनिबार वा आईतबारसम्म माधव नेपालले निर्णय दिने स्रोतले जनाएको छ ।
यो पनि बलिउड अभिनेत्री करीना कपुर खानले सैफअलीका पुर्व पत्नि अमृता सिंहसंग जीवनमा कहिल्यै पनि भेट नभएको बताएकी छन् । उनले सो कुरा बलिउडका निर्देशक तथा निर्माता करण जौहरको कार्यक्रम ‘कफी विथ करण ६’ मा बताएकी हुन् ।
जुन कुराको खुलासा करिनाले गरिन्, त्यो कुरा सुनेर कार्यक्रमका होस्ट करण त आश्चर्यमा परे परे साथसाथै करिनाको उक्त कुरा सुनेका सबै र त्यो कार्यक्रम हेरिरहेका सबै सोशल मिडियाका यूजरहरु पनि आश्चर्यमा नै परे । करिनाले उक्त कार्यक्रममा अमृतासँग आफ्नो भेट नै नभएको र सैफसँग भेट्दा अमृतासँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेको बताएकी थिइन् ।
करिनाको यो कुरा सुनेर अमृता र सैफका छोराछोरी सारा र इब्राहीम पनि रिसाएको खबर बाहीरिएको छ । खबरका अनुसार करिनाले आफ्नो आमासंग कहिल्यै भेट नभएको भनेर भन्नु भनेको आफ्नी आमाको बेइजत गरेको छोरी सारा र छोरा ईब्राहीमले बताएका छन् ।
उनीहरुले करिना कुनै आउट साईडर नभएको हुनाले आमा बुवाको विबाहदेखि उनीहरुको प्रेमको चर्चा र फिल्मी क्षेत्र एउटै भएको बताउँदै सानैदेखि करिनाले आमा अमृतालाई देख्दै आएको पनि बताएको कुरालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा उदृढ गरिएको छ ।
अभिनेत्री करीना अहिले दोस्रोपटक गर्भवती भएकी छन् । गर्भवती भएपछि उनी चर्चामा आएकी छिन् । उनले बलिउडका अभिनेता सैफ अली खानसँग सन् २०१२ मा विवाह गरेकी थिइन् । उनका एक छोरा तैमूर समेत विभिन्न कारण चर्चामा आइरहन्छन् । सैफले करीनाभन्दा अगाडि सन् १९९१ मा अमृता सिंहसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर उनीहरुको सन् २००४ मा सम्बन्धवि’च्छेद भएको थियो ।
महिला राष्ट्रपतिमाथी अन्याय भएको देख्दा मेरो मन दुखेको छ ः प्रधानमन्त्री ओली
प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालको अर्को काण्ड बाहिरियो, थाहा पाउने सबैजना चकित